Homeसमाचारगुराँस टिप्नेलाई पाँच हजार ज’रिवाना
April 5, 2021 admin समाचार 2882
अन्नपूर्ण गा’उँपालिका–६ घोडेपानीका बासिन्दाले गुराँसको फूल टिप्नेलाई जरिवाना तिराउने नियम बनाएका छन् । घोडे’पानी टोल सुधार समितिले आइतबार एक सार्वज’निक सूचना जारी गरेर गुराँसलगायत अन्य फूल अनुमति बिना टिप्न रोक लगाएको जना’एको छ ।
समि’तिका अध्यक्ष वीरेन गर्बुजा पुनले अनुरोधलाई अटेर गरेर गुराँस टिप्नेलाई रु पाँच हजार जरिवाना तिरा’उने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । ‘गुराँसको फूल टिप्ने क्रममा हाँगा भाँच्दा रुख मासिने खतरा बढेको छ’, उहाँले भन्नुभयो ‘राष्ट्रिय फूल गुराँस संर’क्षणका लागि यस्तो निर्णय गरिएको हो ।’ गुराँसको फूल नपाक्दै टिपिदिदाँ त्यसको बिउ भुइमा झर्ने र नयाँ बिरुवा प’लाउन नपाउने समस्या हुने उहाँले बताउनुभयो ।
घोडेपानीको जङ्ग’लमा पछिल्लो दश वर्षयता गुराँसका रुख काट्न पनि रोक लगा’इएको छ । विश्वमा ४२ प्रजातिका गुराँस पाइन्छन् । नेपालमा ३२ प्रताजिका छन् । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयो’जना एक्यापले गरेको अध्ययन अनुसार घोडेपानी क्षेत्रमा १६ प्रजातिका लालीगुराँस पाइन्छन् । एकै स्थानमा धेरै प्र’जातिका गुराँस पाइने यस क्षेत्रको जङ्गल गण्डकी प्रदेशकै ठूलो भएको आकलन गरिएको छ । वसन्त ऋतृृसँगै घोडेपानी क्षेत्रको गुराँसको जङ्गल अवलो’कनका लागि केही दिनयता पर्यटकको चाप बढेको छ ।
वनैभरि रा’ताम्मे फुलेका गुराँसका रङले यहाँको जङ्गल निकै मनमोहक र आकर्षक बनेको छ । गुराँसले भरिएको जङ्ग’लमा भ्रमण गर्न र प्राकृतिक सौन्दर्यमा रमाउन आउने पर्यटक बढ्न थालेका घोडेपानी टोल सुधार समितिका कोषाध्यक्ष ज्ञानबहादुर ग’र्बुजाले बताउनुभयो ।
बेनी, बागलुङ, पोखरा, चितवन, काठमाडौँ’लगायत क्षेत्रबाट विद्यार्थी, कर्मचारी र व्या’पारी समूह बनाएर घोडेपानी भ्रमणमा आउने गरेका छन् । दैनिक १५० देखि २०० को हाराहारीमा आन्तरिक पर्यटक आउन थालेका बताइएको छ । पाखोमा फुलेका गुराँस’को जङ्गलको पृष्ठभूमिमा धौलागिरि, गुर्जा, अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रेलगायत १६ भन्दा बढी हिमाल र सूर्योदयको दृष्य अवलो’कन गर्न सकिन्छ ।
यो पनि: भा&रतको सिम्भावली सुगर लिमिटेडले निर्यात गरेको ७२ हजार किलो चिनी आयात गर्न अयोग्य देखियो। जलेश्व:रस्थित खाद्य आयात–निर्यात गुणस्तर प्रमा’णीकरण कार्यालयले उक्त चिनीको उपभोग गर्ने म्याद नाघेको भन्दै प्रतिवेदन बुझायो। तर, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागकी तत्कालीन महानिर्देशक डा. मतिना वैद्यले उक्त प्रतिवेदनविपरीत ‘योग्य’ भनेर प्रमा’णित गराइदिइन्।
कृषि तथा पशु’पन्छी विकास मन्त्रालयले उक्त विषयमा छानबिन गर्न तत्कालीन सहसचिव डा. नारायण रेग्मीको संयोकत्वमा समिति गठन गर्‍यो। समितिले विभागकी महा’निर्देशक डा. वैद्यले जानाजान गम्भीर प्रकृतिको लापर’वाही र त्रुटि गरेको प्रतिवेदन दियो। समितिले महानिर्देशक डा.वैद्यमाथि निजामती ऐनअनुसार कडा का’रबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। तर, मन्त्रालयले महानिर्देशक पदबाट ह’टाएर अन्यत्र सरुवा मात्रै गरेको छ।
‘आया’तीत चिनीको परीक्षण सम्बन्धमा विभागको लापरवाही देखिनुका साथै प्रचलित कानुनको समेत पालना नगरेको पाइ’एकोले चिनीको परीक्षण कार्यमा संलग्न कर्मचारी र विभागका महानिर्देशकलाई कानुनब’मोजिम कारबाही गर्नू’, छानबिन स’मितिको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ५ मा छ। यो समाचार आजको अन्न’पूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ । न्युज24 बाट
May 26, 2021 admin समाचार 2678
बेहुलि हुँदा निशा घिमिरे यसरी सजिएकी थिइन्,आहा कति राम्रि (हे’र्नुहोस् भिडियो)
June 19, 2021 admin समाचार 2579
कलाकारलाई राष्ट्रिय ग’हना भनेर नामाकरण गरिएको छ ।तर यी चेलि बी स बर्षको कलिलै उमेरमा जीवन र मृ’ त्यु सग लडिरहेकि छिन् ।निसा घिमिरे नेपाली चलचित्र र मोडलिङ क्षेत्रमा उनिले १२ वटा भन्दा धेरै गित’हरुमा
October 4, 2020 admin समाचार 8296